So Yɛte “Nna a Edi Akyiri” no Mu? - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
4 Wɔkyerɛkyerɛɛ mu wɔ nhoma yi ti a edi eyi anim no mu sɛ Yesu Kristo bɛyɛɛ Ɔhene wɔ soro wɔ afe 1914 mu. (Daniel 7:13, 14) Yesu nsa kaa Ahenni no akyi bere tiaa bi no, ɔyɛɛ biribi. Bible ka sɛ: “Ɔko baa soro: Mikael [Yesu din foforo] ne n’abɔfo ne ɔtweaseɛ no [Satan Ɔbonsam] koe, na ɔtweaseɛ no ne n’abɔfo ne wɔn koe.”* Satan ne n’abɔfo bɔne, adaemone no, dii nkogu wɔ saa ɔko no mu, na wɔtow wɔn fii soro guu asase so. Onyankopɔn honhom mu mma anokwafo dii ahurusi sɛ wɔatow Satan ne n’adaemone agu. Nanso, na nnipa rennya saa anigye no bi. Mmom no, Bible hyɛɛ nkɔm sɛ: “Asase…nnue, efisɛ Ɔbonsam asian aba mo nkyɛn a ne bo afuw denneennen, efisɛ onim sɛ ne bere a aka yɛ tiaa.”—Adiyisɛm 12:7, 9, 12.
6“Ɔman bɛsɔre atia ɔman, na ahenni atia ahenni.” (Mateo 24:7) Wokunkum nnipa ɔpepem pii wɔ akodi mu wɔ afeha a etwaam no mu. Britaniani abakɔsɛm kyerɛwfo bi kyerɛwee sɛ: “Afeha a ɛto so 20 no ne afeha a wodii awu wom sen biara wɔ abakɔsɛm mu.…Ɛno ne afeha a ɛkame ayɛ sɛ wɔkɔɔ so dii ako wom bere nyinaa, mmere tiawa bi pɛ na na akodi akɛse nkɔ so wɔ baabi.” Worldwatch Institute (ɛyɛ kuw bi a wɔde wɔn ani di nsɛm a ɛkɔ so wɔ wiase akyi) bɔ amanneɛ sɛ: “Nnipa pii a wokunkum wɔn wɔ akodi a ɛkɔɔ so wɔ afeha [a ɛto so 20] no mu yɛ nnipa dodow a wowuwui wɔ akodi a ɛkɔɔ so fi afeha a edi kan Y.B. besi afe 1899 mu no mmɔho abiɛsa.” Efi afe 1914 reba no, nnipa bɛboro ɔpepem 100 na wɔawuwu wɔ akodi mu. Nnipa ɔpepem pii na wɔadi yaw ne awerɛhow esiane sɛ wɔahwere wɔn adɔfo wɔ akodi mu nti. Ebi mpo a, wo nso woahwere wo dɔfo bi wɔ saa kwan yi so.
7‘Aduankɔm bɛba.’ (Mateo 24:7) Nhwehwɛmufo ka sɛ, efi mfirihyia 30 a atwam mu no, aduan aba pii. Nanso, aduankɔm da so wɔ hɔ esiane sɛ nnipa pii nni sika a wɔde bɛtɔ aduan anaa asase a wɔbɛyɛ so afuw nti. Wɔ aman a wonnyaa nkɔso pii mu no, nnipa bɛboro ɔpepepem biako na sika a wodi da koro yɛ dɔla biako anaa ennu saa mpo. Saa nnipa yi mu dodow no ara di kɔm daa. Wiase Nyinaa Akwahosan Ahyehyɛde no bu akontaa sɛ aduan pa a wonnya nni yɛ ade titiriw a ɛma mmofra bɛboro ɔpepem anum wuwu afe biara.
8“Asasewosow akɛse bɛba.” (Luka 21:11) Sɛnea U.S. Dwumadibea a Wɔyɛ Abo Mu Nhwehwɛmu kyerɛ no, efi afe 1990 nkutoo reba no, asasewosow a ano yɛ den a etumi sɛe adan na ɛpaapae asase 17 na esisi afe biara. Sɛ wɔkyekyɛm pɛpɛɛpɛ a, asasewosow ahorow a ano yɛ den a etumi sɛe adan koraa sisi afe biara. Amanneɛbɔ foforo kyerɛ sɛ: “Asasewosow akunkum nnipa ɔpehaha pii wɔ mfirihyia 100 a atwam no mu, na nkɔanim a wɔanya wɔ mfiridwuma ne adansi ho nimdeɛ mu no ntumi mmoa mmaa nnipa dodow a ekunkum wɔn no so ntewee ahe biara.”
9“Ɔyaredɔm…bɛba.” (Luka 21:11) Ɛmfa ho nkɔso a wɔanya wɔ aduruyɛ mu no, onyin ne yare ahorow rehaw adesamma. Amanneɛbɔ bi ka sɛ yare ahorow 20 a wonim no yiye a ebi ne nsamanwaw, atiridiinini, ne ayamtunini, asan asɔre kɛse nnansa yi, na nyarewa no bi wɔ hɔ a ɛyɛ den sɛ ɛho nnuru a wɔnom no betumi asa. Nokwarem no, nyarewa foforo 30 na ayi ne ho adi. Emu bi wɔ hɔ a wonnyaa ano aduru na ekunkum nnipa pii.
“Wɔbɛka ahenni ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa.” —Mateo 24:14
Akodi, aduankɔm, asasewosow, ne ɔyaredɔm na ahyɛ nna a edi akyiri yi agyirae. —Mateo 24:7; Luka 21:11.
* Sɛ wopɛ nkyerɛkyerɛmu a ɛkyerɛ sɛ Mikael yɛ Yesu Kristo din foforo a, hwɛ Nkekaho no.